"Tarisa Ruzha naMark Ronson" iyo nyowani Apple TV + docuseries pane tekinoroji mumumhanzi | Ndinobva mac
"Tarisa Ruzha naMark Ronson" iyo nyowani Apple TV + docuseries pane tekinoroji mumhanzi
Isu tinoenderera mberi neApple TV + zvinyorwa. Kwete chete kuti isu tichazokwanisa kunakidzwa nehupenyu hweumwe wevakuru seLouis Armstrong. Tinogona zvakare kunakidzwa neimwe yezviteedzana iyo inogona kukwezva yakanyanya kutariswa zvine chekuita nemumhanzi. Ndezve "Tarisa Ruzha naMark Ronson" uye imomo inoitirwa kudzidzisa muoni mashandisiro eetekinoroji mumimhanzi.
Tevere 30 de julio de 2021 PaApple TV +, tichava nemutambo wepasi rose we "Tarisa Ruzha naMark Ronson." Iyi nyowani nyowani ichaongorora hunyanzvi hwehunyanzvi hunoshandiswa mumimhanzi naPaul McCartney, Questlove, King Princess, Dave Grohl, Ad-Rock naMike D weBeastie Boys, Charli XCX nevamwe vazhinji.
Iyi nyowani nyowani ichava nezvitsauko zvitanhatu uye ongorora kugadzirwa kwenzwi uye tekinoroji yechimurenga yakagadzira mimhanzi sekuiziva kwedu. Kubva kuna Oscar-anokunda mugadziri Morgan Neville (Makumbo makumi maviri kubva kuStardom) uye akagamuchirwa naMark Ronson, anonyanya kuzivikanwa pasi rose, Golden Globe uye ka20-akakunda Grammy DJ, "Tarisa Ruzha naMark Ronson" rakaburitswa chete. kuburikidza neApple TV + kunyoreswa.
Chikamu chega chega chedhizaini chichatevera Ronson sezvaanowana iyo ngano dzisingazivikanwe kumashure kwekugadzirwa kwemimhanzi uye marefu vagadziri uye vagadziri vari kuda kuenda kunowana iro rakakwana ruzha. Mimhanzi nehunyanzvi zvinoongororwa pamwe chete netekinoroji kuburikidza nehurukuro dzakajeka nenziyo dzemimhanzi senge zvataurwa pamusoro.
Pakupera kwechikamu chega chega, Ronson achagadzira nekuburitsa chakasarudzika chidimbu chemimhanzi yepakutanga vachishandisa tekinoroji uye matekinoroji anosanganisira reverb, synthesizer, auto-tune, madhiramu, sampling, uye kukanganisa. Hunyanzvi hwe nzeve nemeso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » "Tarisa Ruzha naMark Ronson" iyo nyowani Apple TV + docuseries pane tekinoroji mumhanzi
Blush ndiyo nyowani nyowani inouya chete kuApple TV +